Home News Nicholas Haysom oo ku eedeeyay Khilaafka DF iyo Maamullada in ay Masuul...
Nicholas Haysom oo ku eedeeyay Khilaafka DF iyo Maamullada in ay Masuul ka tahay Dowladda Federaalka ah
Nicholas Haysom, wakiilka cusub ee Qaramada Midoobey usoo magacawdey Soomaaliya ayaa ka hadlay markii ugu horeysay khilaafka ka dhaxeeya dowlad federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Is-marin-waagaan ayaa sababey in dowlad goboleedyadda ay xiriirka ujaraan dowladda Federaalka xili ay sheegeen inay ku fashilantey fulinta heshiisyo ay horey ula galeen iyo farogelin ay iyaga ku hayso.
Khilaafkani siyaasadeed ayuu tibaaxay Haysom oo la hadlay warbaahinta UN-ka inay qayb ka tahay xasilooni darro baahsan oo uu tilmaamay inay qayb ka tahay caqabadaha hortaagan in dowladnimada dalka ay hagaagto.
“Hagaag. Soomaali waxay wajaheysaa caqabado kala duwan oo dhowr ah, kuwaasi oo hortaagan in helo tiirarka saxda ah ee dowladnimadda. Waxaan kamid ah, in heshiis laga gaaro saxiixida Dastuurka cusub, doorashooyinka hufan iyo xaalada hadda taagan ee udhaxeysa dowladda iyo dowladaha xubinta ka ah, kuwaasi oo doonaya inay sameystaan dowlad Federaal ah,” ayuu yiri Nicholas Haysom.
Nicholas Haysom ayaa bedalaya Micheal Keating, kaasi oo mudadda xileedkiisu ku egyahay 1-da bisha October ee sanadkaan, waxaana la filayaa in xarunta UN-ka ee magaalada Muqdisho ay ka qabsoonto munaasabad ay xilka ku kala wareegayaan.
Ergayga cusub ee Qaramada Midoobey uqaabilsan arrimaha Soomaaliya oo ah qareen iyo shaqsi u olaleeya arrimaha Dimuqraadiyadda, kaasi oo udhashay dalka South Afrika ayaa horey uga soo shaqeeyay dalalka Afghanistan iyo South Sudan, kuwaasi oo ay ka jiraan colaado tobanaan sano socda.
Previous articleDowladda Kenya oo heshiis iskaashi la saxiixatay Dowladda Somaliland
Next articleDeeq bixiyayaasha oo Qaati ka Jooga Dawladda Somaliya ( Donor Fatigue)
Ururka ONLF oo sheegay in uusan Wali Xor aheeyn Qalbi Dhagax!!
WARBIXIN: Madaxtooyada Soomaaliya Oo Dugaal U Noqotay Dhiigmiiratada Ummadda Soomaaliyeed